नयाँ घोषणापत्र पढ्दै बस्ने कि पहिलेका घोषणा माथि प्रश्न पनि गर्ने ? | EduKhabar
काठमाडौं - आगामी बैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मिति नजिकिदैं जाँदा राजनीतिक दलहरुले फेरि धमाधम घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षालाई जोड दिएको वाचा गर्दैछन् । उनीहरुलाई मतदाताले निर्मम प्रश्न गर्नु पर्ने छ : यस अघिको निर्वाचनमा गरेको वाचा कति पुरा भए ? पुरा नभएका किन भएनन् ?
प्रकाशित मिति २०७९ वैैशाख १२ ,सोमबार